Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013) - Wednesday, 17 February 2021
Jilli Koreewwan Dhaabbii Caffee D/T/ Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Obbo Yiilmaa Wayyeessaan durfamu Aanaa Geeraafi Qarsaatti qonna Qamadii, kilaastara bunaa, kuduraafi muduraa adda addaa jallisiin misoomaa jiru daawwateera.
Daawwannaa Aanaa Geeraatti taasifameen oomishni kilaastara qamadii tokko yommuu ta’u, misooma Bunaa babal’isuuf hojii hojjetamaa jiru dinqisiifachuun muuxannoon kun bakkeewwan biroottis babal’ate diinagdee qonnaan bulaa keenyaa guddisuu irra darbee diinagdee biyyaa keessattis shoora olaanaa kan taphatu ta’uu Obbo Yiilmaan ibsaniiru.
Aanaa Qarsaattis Ganda Marawaatti Avukaadoo, Muuziifi Paappayyaan xaa'oo uumamaa kompoostiin hektaara 1,800 irratti dargaggoota hoji dhabeeyyii waldaan gurmaa’aniin misooma kan jiru ta’uu I/A/Bulchaan Aanichaa Obbo Shamsuu Kamaal kan himan.
Gama biraatiin, jilli kun mana barumsaa sad.2ffaa Sarbootti daawwannaa taasiseen dhiyeessiin kitaabota Herreegaa, Fiiziksii, Keemistiriifi Ingiliffaa kutaa 11fi 12 kan hin jirre ta'uusaafi kutaa 9fi 10 birattis dhiyeessiin kitaabotaa rakkoo ta'uusaa eeruun dhaloota qaruu keessatti gumaachi barsiisaan qabu adda durummaan kan ilaalamu waan ta’eef hanqinni barsiisotaas kan jiru ta'uu dhimma rakkoolee akka mana barumsichaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.
Jilli kun, daawwannaa taasisuun cinaattis dhimmoota adda addaa irratti hawaasa Aanaalee laqmaanii waliin marii taasisee jira.
Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)
Toorbee kana 15504
Ji'a kana 952
2008 irraa eggalee 4493544
Kan Ammaa Ilaalaa jiran 256
Beeksisa Miseensota …
CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...